Mogadishu Journal » Maxkamadda Ciidamada oo xukuntay sarkaal xigeen isku day dil sameeyay
Maxkamadda Ciidamada oo xukuntay sarkaal xigeen isku day dil sameeyay
Mjournal : -Saddex Alifle Boliska Soomaaliyeed Saciid Cumar Cusmaan ayaa loo soo qabtay in uu ka dambeeyay amar diido iyo isku day dil uu ku qaarijin lahaa taliyiiisa, waxaana Ciiamada amniga ay ku soo wareejiyeen Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida 05/05 ee sanadkan.
Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa wixii xilligaas ka dambeeyay guda galay baarista kiiska ka dhanka ah eedeysanaha, waxa ayna soo diyaariyeen gal dacwadeed ka dhan ah Saddex Alifle Boliska Soomaaliyeed Saciid Cumar Cusmaan.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa go’aamisay in loo fariisto kiiska ka dhanka ah Saddex Alifle Boliska Soomaaliyeed Saciid Cumar Cusmaan oo loo heysto amar diido iyo isku day dil, waxaana Garsoorayaasha 28 bishii tegtay dhageysteen dacwadda ka dhanka ah eedeysanaha oo ay soo gudbiyeen xafiiska xeer ilaalinta Ciidamada Qalabka sida.
Ku xigeen Xeer ilaaliyaha guud ee Ciidamada Qalabka Sida dhamme Muumin Xuseen Cabduulaahi ayaa ka hor sheegay fadhiga Maxkamadda in Saddex Alifle Boliska Soomaaliyeed Saciid Cumar Cusmaan uu yahay eedeysanaha dhabta ah iyagoo xafiiska horkeenay Qiraalka eedeysanaha, Markaatiyaal uu ku jiro taliyihii la isugu daray amar diidada iyo isku dayga dil, waxa ayna Maxkamadda ka codsadeen in sharciga la waafajiyo.
Garsoorayaasha Maxkamadda ayaa go’aan ku gaaray iyagoo eegaya Qiraalka eedeysanaha laga qoray, Markaatiyaasha iyo jawaabaha uu eedeysanaha fadhiga Maxkamadda ka hor cadeeyay ee aheyd qiraalka dambigiisa in eedeysanaha lagu xukumo Saddex sano oo xabsi ciidana, laga xayuubiyada darajadii ciidan isla markaana laga saaro liiska Ciidamada, sida uu u sheegay dhammaan dhinacyada dacwadda ka qeyb galay mid ka mid ah garsoorayaasha Maxkamadda D, 1-aad ee Ciidamada Qalabka Sida G/sare Xasan Cabdiraxmaan Aadan (Wabiyow).
C/kariin Qalbi Dhagax oo si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Nairobi